Bungo Stray Dogs – MMANIME
1 Seasons 36 Episodes
Created byTakuya Igarashi
StarringAkira Ishida, Ami Koshimizu, Chiaki Omigawa, Haruka Kudou, Hiroshi Kamiya, Hiroyuki Kagura, Hiroyuki Yoshino, Houchuu Ootsuka, Jun Fukuyama, Junichi Suwabe, Kana Hanazawa, Kaori Nazuka, Kazuya Nakai, Kengo Kawanishi, Kenichi Suzumura, Kensho Ono, Kishou Taniyama, Mamoru Miyano, Masaaki Mizunaka, Masakazu Morita, Minako Kotobuki, Mitsuru Miyamoto, Rikiya Koyama, Shunsuke Takeuchi, Sora Amamiya, Sumire Morohoshi, Takahiro Sakurai, Takayuki Sugo, Tarusuke Shingaki, Toshiyuki Toyonaga, Wataru Hatano, Yu Shimamura, Yuuna Mimura, Yuuto Uemura
Synopsis of Bungo Stray Dogs
နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Anime လေးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့” Bungo Stray Dogs” နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ … မူလဘာသာပြန်သူကတော့ လေလွင့်ပညာရှင်များလို့ ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ ..
Rating 7.8/10 ရှိထားလို့ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ Anime ကောင်းလေးပါ …
ဇာတ်လမ်းကတော့ စွမ်းအင်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စုံထောက်အေဂျင်စီတစ်ခုက စုံထောက်တွေရဲ့ အမှုဖြေရှင်းတာတွေ အခက်အခဲတွေကို တွေ့ရမှာပါ ။
အဓိက ဇာတ်ဆောင်ကတော့ နာကဂျီမာ အဆုရှီလို့ အမည်ရပြီး မိဘမဲ့ဂေဟာကနေအကြောင်းတစ်ခုကြောင့် နှင်
ဒါကြောင့်ဒဇိုင်းတို့အဖွဲ့ဟာ အဆုရှီကို အသုံးချ ပြီး ကျားဖမ်းဖို့ ပြင်ပါတော့တယ် …
ဒါပေမယ့် … မထင်မှတ်ထားတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့…….
ဒီAnime ရဲ့ seasonတိုင်းမှာDazaiရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကနဲအကျဉ်းဆီပါဝင်နေပါတယ်။
သုံးပွင့်ဆိုင်စည်းရုံးရေးစစ်ပွဲအဆုံးသတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ,အစိုးရဗျူရိုကရေစီအရာရှိ Ango Sakaguchiဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကယခင်Port Merfiaခေါင်းဆောင်သေဆူံးမှုအပြီးမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။
အဲ့ဒိအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းCharacterနဲ့လူကြိုက်များတဲ့Osamu Dazaiဟာမြို့ရဲ့နေရာအတော်များများကိုပျက်စီးစေခဲ့တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပက်သက်တဲ့ကောလဟာလတွေနဲ့ယခင်Mafiaခေါင်းဆောင်ပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲမှုတွေ ကိုစုံစမ်းဖို့တာဝန်ပေးခြင်းခံထားရတဲ့လူသစ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်။
သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနုသေးတာကြောင့်ပြိုင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Sheepလို့အမည်ရတဲ့ ပင်ကိုစိတ်ကြမ်းလူကြမ်းChuuya Nakaharaနဲ့တွဲပြီးအဲ့ဒိအဖြစ်အပျက်ရဲ့နောက်ကွယ်ကအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့Arahabakiဆိုတဲ့ဒဏ္႑ာရီယုံတမ်းစကားအပေါ်မှာအဖြေရှာကြပါတော့တယ်။
လက်ရှိနေ့ရက်တွေမှာတော့Armed Detective Agencyဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးဟာနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့လည်ပတ်လို့နေပါတယ်။ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့အေးချမ်းတဲ့အချိန်လေးဟာဘယ်လောက်မှကြာကြာမခံလိုက်ပါဘူး၊ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါ။
Bungo Stray Dogs S03 Episode 1
Bungo Stray Dogs S03 Episode 2
Bungo Stray Dogs S03 Episode 3
Bungo Stray Dogs S03 Episode 4
Bungo Stray Dogs S03 Episode 5
Bungo Stray Dogs S03 Episode 6
Bungo Stray Dogs S03 Episode 7
Bungo Stray Dogs S03 Episode 8
Bungo Stray Dogs S03 Episode 9
Bungo Stray Dogs S03 Episode 10
Bungo Stray Dogs S03 Episode 11
Bungo Stray Dogs S03 Episode 12
Airs OnAniplus Asia, GBS, Tokyo MX
Firt air date2016-04-07
Last air date2019-06-28
Home PageBungo Stray Dogs
[Hentai] Jewelry The Animation
[Hentai] Boy Meets Harem The Animation